ဒီအချိန်ကျွန်တော်စိတ်ပူတာအပြစ်လား (ကဗျာ)… – PVTV Myanmar
Like – 8.5K Share – 777
2021-06-02 at 7:09 PM
2021-06-02 at 7:26 PM
Joke Gyi says:
2021-06-02 at 7:38 PM
Wai Wai Lwin says:
2021-06-02 at 7:40 PM
2021-06-02 at 8:19 PM
2021-06-02 at 8:38 PM
Htoon Htoon Oo says:
𝐑𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓 𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒
𝐏𝐑𝐎𝐔𝐃 𝐎𝐅 𝐘𝐎𝐔
Eden Lyly Ngun Paw says:
အခု့တော့ပြည်သူတွေအားလုံး အဆိပ်ရည်သောက်နေသလိုပဲ အကုန်ခံစားနေကြပါပြီး ဘယ်တော့မှမကျေပါဘူး အခုမှဘဲငါတို့ပြည်သူတွေအလှည်ရောက်ပါပြီး
Zaw Shumawa Ei says:
2021-06-03 at 8:43 AM
ေမတၱာျဖင့္ကဗ်ာရြတ္ဖတ္ေပးေသာ ညီမေလး Phyu Ei ကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။
Sayarma Aye says:
2021-06-03 at 10:31 AM
အရမ်းကောင်းတဲ့ကဗျာကို ဖတ်သူကလည်းတော်ဆိုတော့ အရမ်းကိုပြည့်စုံသွားပါတယ်။
2021-06-03 at 1:21 PM
2021-06-04 at 2:00 PM
2021-06-04 at 7:08 PM
Nyo Nyo Myat says:
2021-06-05 at 8:03 AM
ဘေးကင်း လုံခြုံ အောင်မြင်ကြပါစေ
2021-06-05 at 3:01 PM
I wanna cry😥. Let fight for democracy.
2021-06-06 at 8:47 AM
အရမ်းကောင်းတယ် အသံရောခံစားမှု့ရော စကားလုံးရော ကြိုက်တယ်
2021-06-07 at 4:04 PM